बसपार्कमा केहिबेर उभिँदा महिला पत्रकारलाई नै दर्जनौँ यौन प्रस्ताव - Indian Girls Nude XXX Images
बसपार्कमा केहिबेर उभिँदा महिला पत्रकारलाई नै दर्जनौँ यौन प्रस्ताव
केही साता अघि म मेरा आफन्तसँग भेटघाट तथा विशेष कामले काठमाडौंस्थित नयाँ बसपार्क जानुपर्यो । मेरा आफन्तसँग भेटघाट गर्ने पर्याप्त समय नभएको र उहाँलाई तुरुन्त देशको अर्कै कुनामा पुग्नु पर्ने भएकाले उहाँले भेट्नलाई उपयुक्त स्थान सायद त्यहीँ ठान्नुभयो ।
म बसपार्क पुग्दा उहाँ अइपुग्नु भएको थिएन । त्यसैले प्रतिक्षा गर्नुपर्यो । करिब आधा घण्टाको त्यो प्रतिक्षा मेरा लागि निकै कष्टपूर्ण रह्यो। छिन-छिनमा केही पुरुष आउने अनि नानाभाँती बोल्ने, फेरि अर्को समूह आउने त्यसै ब्यवहार गर्ने ।
भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ, तर ति सबै प्रश्न यौनसँग सम्बन्धित थिए । सम्भवत: एक यौनकर्मीलाई सोधिएको प्रश्न थियो ।
हैरान भएर म एक ठाउँबाट सरेर अर्को ठाउँमा पुग्थेँ, तर बिडम्बना त्यो सम्पूर्ण एरिया नै यौन बजार रहेछ । मैले आफूलाई बचाउन निकै संघर्ष गर्नु पर्यो ।
बोलौँ पनि कति बोलौं ? कतिलाई जवाफ दिउँ ? कतिलाई थर्काउँ ? थकित भएँ म । एक मनले लाग्यो घर फर्किन्छु, तर आफन्तको चित्त दुखाउन चाहन्नथेँ, त्यसैले कुरिरहेँ।
सब ति घृणित् शब्द, वाक्य सुनेको नसुनै गरेँ । लाग्यो, ‘महिला त केवल यौन चाहना परिपूर्ति गर्ने साधनमात्र रहेछन् ।’ त्यहाँ नशामा बरालिएका युवादेखि अधबैंशेसम्म सबै त्यही चाहना परिपूर्तिका लागि भौँतारिरहेका थिए । सबैको मलाई हेर्ने दृष्टिेकोण एउटै थियो ।
त्यस्तो अवस्थामा कसरी बचाउन सक्थेँ म आफूलाई ति दुष्ट नजरबाट ? कसरी ति नजरलाई शुद्ध पार्न सक्थेँ म ? कसले भन्थ्यो कि बसपार्क जाने सबै युवती या महिला त्यो पेशामा संलग्न छैनन् ? के महिला एक्लै बसपार्क जानै नहुने ? यी सब कुरा सोच्दा-सोच्दै प्रतिक्षाको घडी सकियो । आफन्तसँग भेट भयो ।
खुशी थिएँ म, ढुक्क पनि भएँ । अब कसैले केही भन्न सक्दैन भन्ने लाग्यो । मेरा पुरुष आफन्तसँग गफ गरिरहँदा एक्कासी एक युवक आएर प्रश्न सोध्यो, ‘होटल चाहिन्छ ?’ म निशब्द भएँ । अब सोच्न र बोल्न केही बाँकी रहेन। केही रहेन।
Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)	November 16, 2014 admin	Posted in Most Demanded	Post Permalink
← selena gomez nacked play boy photo shoot leaked	My sex experience with my personal doctor in pune →